Budata iSkysoft iPhone Data Recovery maka Mac
Budata iSkysoft iPhone Data Recovery
Free Budata maka Mac (57.70 MB)
Budata iSkysoft iPhone Data Recovery,
Ọ bụ ezie na iOS sistemụ arụmọrụ dị ntakịrị karịa gam akporo, iPhone na iPad ọrụ nwere ike mgbe ụfọdụ izute data ọnwụ ma ọ bụ na mberede ehichapụ faịlụ. Ya mere, ndị ọrụ nwere ike ịchọ ngwa dị iche iche ma ọ bụ ngwanrọ iji nwetaghachi faịlụ ndị furu efu. Ọ bụrụ na ị zutere ozi ọnwụ na gị iOS ngwaọrụ na-achọ ka weghachi ha, otu nime Mac ngwa ị nwere ike iji bụ iSkysoft iPhone Data Recovery.
The interface nke ngwa dị nnọọ mfe iji na-akwado ya nụzọ kwere nghọta. E nwekwara niile mkpa ịdọ aka ná ntị nke mere na ị na-adịghị na mberede jikọọ gị iOS ngwaọrụ gị Mac ngwaọrụ noge echichi. Iji malite iweghachi data gị, ọ na-ewe naanị sekọnd ole na ole iji soro nrụnye wee mepee ngwa ahụ.
Ọ bụ ezie na iSkysoft iPhone Data Recovery abụghị free, ọ nwere ike ịrụ data mgbake na-enweghị nsogbu ọ bụla. Ka ileba anya nkenke na ozi o nwere ike nwetaghachi;
Weghachite foto na vidiyo
Naghachi kọntaktsị na ndekọ oku
iyi iyi foto, ndetu, kalenda, nchetara, ọkacha mmasị Safari na ihe memos olu
Direct data mgbake
Naghachi data si iTunes backups
Nezie, data ị chọrọ naghachi ekwesịghị inwe ọtụtụ ozi overwritten. Nihi na ozi nke ehichapụrụ ogologo oge, ọ dị mwute ikwu, ga-esi ike ịnweta nihi na a ga-ede data ndị ọzọ na ha. Karịsịa, m nwere ike ikwu na ọ bụ ngwá ọrụ dị irè megide ọnwụ nke ozi chere ndị ọrụ na-alọghachi site na iOS 8 na iOS 7.
iSkysoft iPhone Data Recovery Ụdịdị
Nha faịlụ: 57.70 MB
Mmepụta: iSkysoft Studio